Mogadishu Journal » 2018 » July » 1
Ciyaartan oo aheyd mid aad u xiisa badan ayaa qaybteedi hore ku soo idlaatay barbato 1-1 ah oo ay labada xul kukala nasteen. Balse qaybtii markii la isku soo laabtay ayay labada xul abuureen fursado gool noqon karay walow aysan xulna usuurta galin in uu shabaqa gaaro. Waxaana loo...
Saraakiil Cadaan ah oo baaraya Madaafiicdii ku dhacday Wadajir
Mjournal :-Ciidanka Booliska Soomaaliya ee sida gaarka ah loogu tababaray Baarista Qaraxyada ayaa ku hawlan Baarista tiro Madaafiic ah oo saakay ku dhacday Xaafadda Abasiibka oo ku dhaw Xerada Xalane ee Degmada Wadajir. Madaafiicdka ku dhacday degmada Wadajir oo tiro ahaan lagu...
Madaafiic ku soo dhacday qeybo ka mid ah Muqdisho xili ay wadooyinka xiran yihiin
Mjournal :-Tiro Madaafiic ah ayaa kusoo dhacay xaafado katirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafado ku dhaw dhaw Xarunta Xalane ay dagan yihiin Taliska ciidamada AMISOM. Inta la xaqiijiyay waxaa xaafadahan ku dhaw xarunta Xalane ku soo dhacay ilaa sadex Madfac...
Khudbadii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay Munaasabadda 1-da Luulyo
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska sannad-guurada 58-aad ee ka soo wareegtay markii ay xoroobeen Gobollada Koonfureed iyo israacii labada qeybood ee dalka,...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan Xuska sanad guurada 58-aad ee 1- Luulyo, maalintaas oo ahayd maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago Gobolada Koonfureed ee...
Shabaab oo Muqdisho ku toogtay Mid ka mid ah Ergadii Xildhibaanada soo doortay
Mjournal :-Rag ku hubeysnaa Bastoolado ayaa xalay waxa qeybo ka mid ah degmada Dharkeenlay ee gobolkan Banaadir ay ku dileen Oday dhaqameed ka mid ahaa Ergadii soo dooratay Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed. Nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu Magacaabi jiray Ibraahim...
Munaasabada 1da Luulyo oo xalay laga xusay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska sannad-guurada 58-aad ee ka soo wareegtay markii ay xoroobeen Gobollada Koonfureed iyo israacii labada qeybood ee dalka, taasoo asaas u noqotay curashada...